Trusty Shops|Purasoft Collagen Moisturiser
Purasoft Collagen Moisturiser
Product Code: oz0362
Lanolin နှင့် Collagen ဟာ အသားအရေကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီး ပျော့ပျောင်းနုပျို စေကာ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါတယ်။
Collagen Moisturiser မှာပါတဲ့ Lanolin and Collagen နှင့်အတူ အခြားအရေပြားအကျိုးပြုတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများစွာသည် အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး စိုစိုပြေပြေဖြစ်စေဖို့ အထူးကူညီပေးပါတယ်။ Moisturiser ဟာ လူတိုင်းအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာ့အပူချိန်ကလည်းမြင့်တက်လေလေ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကလည်း မြင့်တက်လေလေပါဘဲ။ ရေချိုးပြီးတာနှင့် အရေပြားဟာ ခြောက်သွေ့လာပါတယ်။ ဒီအတွက် Collagen Moisturiser ကို လိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးလို့့ လှလှပပ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါအပြင် အရေပြားကို စင်ကြယ်စေပြီး နုပျိုစေပါတယ်။ အရေပြားပျက်စီးခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အသုံးပြုပုံ - Toning/ ရေဆေးပြီးနောက် Collagen Moisturiser ကို မျက်နှာနှင့် လည်ပင်း ပေါ်သို့ လိမ်းပါ။ အရေပြားမှ အကုန်စုပ်ယူပြီးသည်အထိ ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သည်။
You're reviewing: Purasoft Collagen Moisturiser
Jurlique Youthful Radianc ...
Jurlique Youthful Radiance4in 1 Singnature set
အသားအရေနူးညံ့လှပစေပြီး တစ်ဘူးထဲမှာ (၄)မျိုး အစုံပါလို့ သယ်ရသုံးရလွယ်သလို လက်ဆောင်ပေးဖို့လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
Choose4 in 1
Trilogy Rosapene Night Cr ...
အရွယ်တင်စေပြီး တစ်နေကုန် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့် အရေပြားညိုမဲခြင်း၊
LadyKin Elmaju Broccoli S ...
နူးညံ့သော အထိအတွေ့နှင့်ရေဓာတ်အပြည့်ဖြည့်တင်းပေးပြီး အသားအရေကိုဖြူစင်ဝင်းပစေပါသည်။
ChoosePack Size - 60ml
Unichi Forty Fathoms Skin ...
Unichi Forty Fathoms Skin Regenerator
အစွမ်းထက်သော သဘာဝ fucoidan ပါဝင်တာကြောင့် အသားရည်ကို ချောမွေ့စေပြီး တင်ရင်းစေပါသည်
Redwin VE Cream
ဗီတာမင် E နှင့် Evening Primrose Oil ပါရှိသောကြောင့် အသားရေ အစိုဓါတ်ကို သိုလှောင်ပေးနိုင်ပြီး အသားရေ ခြောက်သွေ့ ယားယံခြင်းကို ကာကွယ် တားဆီးပေးသည်။
Youth Activator ကိုဂျင်ဆင်းနှင့်မြင်းခွာရွက်အဆီအနှစ်များဖြင့်ထုတ်လုုပ်ထားသောကြောင့်မျက်နှာပေါ်ရှိ ဆဲလ်သေများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အမဲစက်၊ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်များကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ChoosePack Size - 50ml
LadyKin Affinitic Whiteni ...
ChoosePack Size - 100ml
Tea Tree Face Toner ဟာသဘာဝရှားစောင်း နှင့်စိတ်ကို အေးမြစေသော Lavender ပန်းပွင့် တို့နှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး ချွးပေါက်ပိတ်ခြင်းမှ လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အသားအရောင် ညီအောင်ထိန်းပေးပြီး၊ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းမှလည်း ထိန်းပေးပါသည်။
Healthy Care OPC Antioxid ...
Healthy Care OPC Antioxidant Facial Toner
Cetaphil Moisturising Cre ...
Cetaphil Moisturising Cream - Face & Body
အခုလိုရာသီမျိုးမှာ အရေပြားတွေက ခြောက်ကပ်လို့ စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာကို စိုပြေစေပြီး တာဝန်ယူပေးနေပါတယ်။။
Trilogy Vital Moisturisin ...
အသားအရေ ခြောက်သွေ့သူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပြီး အရေးအကြောင်းများကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေပါတယ်
rebirth origical anti-wri ...
rebirth origical anti-wrinkle cream
အသက်တွေကြီးလာလေ မျက်နာကရင့်နေလို့ အားငယ်နေလား? Rebirth Cream သည် ကလေးလေးလို နုပျိုလှပချောမောစေပါတယ်။
မျက်နှာလိမ်း Day cream ။
KARYTHA Neck & Decolletag ...
KARYTHA Neck & Decolletage Cream
မျက်နှာ၊ လည်ပင်း အသားအရေကို စိုပြေနူးည့ံစေပြီး ကလေးတယောက်လို နုပျိုစေသည်။
Cemoy 21- Day Renew Serum
အသုံးပြုတာ ၂၁ ရက်အပြီးမှာတော့ အသားအရေဟာ အရင်ထက် ပိုမိုတောက်ပလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Choose2ml x 21packs
Kosmea revive illuminatin ...
ရောင်စုံ ရွှေဇဝါ၊ ငွေဇဝါလို အသားအရေလင်းထိန် တောက်ပစေပြီး မူလအတိုင်း ပြန်လည်လန်းဆန်းစေသည်။
Eaoron Crystal White Mois ...
Eaoron Crystal White Moisturiser + SPF 15
အသားအရေကို ဝင်းပဖြူစင်စေတာပဲမဟုတ် တစ်နေကုန် စိုပြေမှုကိုပေးပြီး Sun and UV ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်ရှိဆဲလ်သေများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အရေပြားအတွင်းပိုင်းထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအမဲစက်၊ တင်းတိပ်၊မှဲ့ခြောက်များကိုလည်းသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
Ego Sunsense Moisturising ...
Ego Sunsense Moisturising for Face & Neck
Recommended for the neck and face, this light moisturising sunscreen hasanon-greasy formulation and provides SPF 50+, broad spectrum protection.
အသားဖြူစေသည့် Arbutin ဓာတ်ပါဝင်သောကြောင့် အရေးအကြောင်းများကိုပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေမည်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။